Sein Lyan - စိ န် လျှံ: June 2011
တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြောပြချင်တယ် ဆိုတဲ့ မကြီး(မနော်ဟရီ)ရဲ့ စာသားတချို့ကိုပဲ ငှားပြီး တယောက်ယောက်ကို အော်ပြောလိုက်ချင်တာပဲ။ တကယ်ကိုပဲ တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြောပြချင်နေတာ။ ကျနော် ပြောနေလိုက်တာလဲ တယောက်ယောက်နဲ့ တယောက်မကတော့ပါဘူး။ အိမ်ကလူတွေတောင် ကျနော် ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကို အလွတ်နီးပါးရကုန်ပါပြီး။
ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်လောက်အောင် တစ်ယောက်ယောက်ကို ထပ်ပြောပြချင်နေပါတယ်။ ကျနော်က သူများအကြောင်းလဲ မပြောတတ်ပေမယ့် စပ်မိစပ်ရာ အကြောင်းတွေကိုတော့ တယောက်ယောက်ကို ပြောပြချင်မိပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျနော့်ရင်ထဲမှာ ပြည့်သိပ်ကျပ်နေတဲ့ အကြောင်းတွေပါပဲ။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြောပြချင်နေတဲ့ တစ်ယောက်ယောက် အကြောင်းက ဘယ်သူပါလဲ လို့ မေးရင် ကျနော်ရဲ့  တဦးတည်းသော သူဌေးအကြောင်းပါပဲ။
သူဌေးဆိုပေမယ့် ကျနော့်ထက် အသက်လပိုင်းပဲ ကြီးပြီး ကျနော်ထက် စိတ်အများကြီးငယ်တဲ့ သူဌေးပါပဲ။ ကလေးစိတ်ကို မကုန်သေးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ လုပ်သက်(၈)နှစ်ကြာ Charity အလုပ်ကို လုပ်နေပေမယ့် စိတ်ကတော့ ကလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက် ရုံးမှာ Baby Boss လို့ ချစ်စနိုးခေါ်ပါတယ်။ တကယ်ချစ်တယ်လို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ သူဌေးမျက်နှာကြည့်မယ့် အစားခွေးမျက်နှာ ကြည်လိုက်မယ့် ဆိုတဲ့ ချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ ဆုမျိုးကို သူဌေးက မတောင်းပဲ ပြည့်ပါတယ်။
ကျနော်ကို ပထမနေ့ အင်တာဗြူးတုန်းကဆိုရင် ဘာမှ မမေးပဲ လခတွေ ပေးပြီး အလုပ်တန်းခန့်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲမေးတော့ ဘွဲ့ တွေ အများကြီး ရှိလို့ဆိုပဲ။ ဒါပေမယ့် ရှိတဲ့ စာရွက်စာတန်းတွေကို လှန်ကြည့်လားဆိုတော့ လှန်မကြည့်ပဲ တောင်းသလောက် လစာပေး ၊ ကျနော့်ကိုကြည့်ပြီး NICE ! NICE! I am happy to have you! ဆိုတာနဲ့ ကျောချမ်းပြီး ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာဒီသူဌေးက ပုံမှန်တော့ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သတိထားမိသလို အိမ်မှာတောင် ပြန်ပြောမိပါသေးတယ်။
မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီး အလုပ်တူတူလုပ်မှ သူဌေးအကြောင်းကို ပိုသိလာပါတယ်။မနက်မိုးလင်းလို့ Hi လို့ နှုတ်ဆက်မိတာ ကျနော့်တစ်ယောက်တည်းလို ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ရက်တွေမှာ ကျနောလဲ ထပ်မဟိုင်းတော့ပါဘူး။ အကြောင်းက တခါဟိုင်းပြီး တနာရီကြာ သူဌေးစကားကို နားထောင်လိုက်မှာ စိုးတဲ့အတွက် ရုံးကို သူဌေးရောက်တဲ့အချိန် ဆို ဖုံးလုကိုင်ပြီး အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာ ဖုန်းဆက်ပြကြပါတယ်။ တော်တော် ချစ်မွှေးနဲ့ ပြည်စုံတဲ့သူဌေးပါ။
သူဌေးက ဒီလိုနည်းနဲ့ ဟိုင်းမရတော့ Meeting နဲ့ ဟိုင်းပြန်တယ်။ မနက်တိုင်းလိုလို မီတင်ခေါ်ပါတယ်။ မီတင်ခေါ်ရင် သူကိုယ်တိုင် ၀ယ်လာတဲ့ သီးစုံ လက်ဖက်ခြောက်ရည်ကို တအိုးပြီးတအိုး ဖျော်ပြီး ရှိသမျှ ငယ်ဘ၀တွေကို တဟီးဟီး တဟားဟားနဲ့ ပြောနေပေမယ့် နားထောင်ရတဲ့သူက တယောက်မျက်နှာ တယောက်ကြည့်ပြီး မီတင်ပြီးရင် အိမ်သာမှာ လုတန်းစီဖို့ စိုင်းပြင်နေကြတာပါပဲ။
ဒါကြောင့် သူဌေးနဲ့ မျက်နှာချင်း မဆိုင်အောင် နေကြပါတယ်။ နေ့လည်စာ စာတိုင်း သူဌေးက ဝေလား ၀ါးလား သွားချင်ပေမယ့် ထမင်းစားရင် စကားကျယ်ကျယ်ပြောပြီး ရယ်တတ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့် ဘယ်သူမှ နေလည်စာသွားရင် သူဌေးကို မခေါ်ချင်ပါဘူး။ သူဌေးဖုန်း လာတဲ့အချိန်ကို ရွေးပြီး အလစ်ပြေးရပါတယ်။
ရုံးမှာ သူဌေးက ကျနော့်ကို လန့်ပါတယ်။ စကားတော်ရုံမပြောပေမယ့် ပြောရင် တလုံးတခဲတည်းမို့ တော်ရုံ မပြောရဲ ပါဘူး။ ကျနော် အလုပ်စ၀င်တုန်းက Advertizing and Promotion Executive ရာထူးနဲ့ အလုပ်ဝင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော့်ကို Officer ရာထူးတိုးပြီး Finance ကို ကိုင်ခိုင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ Communication Officer ဖြစ်ပြန်တယ်။ ကြာလာတော့ တင်းလာပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ခုပဲ ဆရာဝန်လုပ်ခိုင်းလိုက်၊ ခုပဲ စစ်ထဲဝင်ခိုင်းလိုက်၊ တော်ကြာ အငြိမ့်မင်းသမီး လုပ်ခိုင်းလိုက် နဲ့ သူ ကစားချင်သလို ကစားသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ သုံးလထဲ ရာထူးက သုံးခုလောက်ဆိုတော့ ကျနော်လဲ တင်းပြီး အလုပ်ထွက်ပါတယ်။ အလုပ်ဝင်တဲ့ လေးလအတွင်းမှာ ထွက်စာ နှစ်ခါတင်ပြီး Confirm Letter လေးခါရပါတယ်။ တခါထွက်စာတင်တိုင်း နောက်နေ့ Confirm Letter ပေးတာပါပဲ။
ပထမတခါ အလုပ်ထွက်တော့ မက်ဆေ့တွေ အမျိုးမျိုးပို့ပြီး သူ့ကို မထားခဲ့ဖို့ ပြောပါတယ်။ ဟမ်.. ပြောရင်းနဲ့ စိတ်ထဲ တမျိုးတောင် ဖြစ်လာပါတယ်။ ကျနော်ကလဲ အလုပ်ကို သံယောဇဉ်ဖြစ်နေတာထက် ပိုက်ဆံကို ပိုသံယောဇဉ် ဖြစ်မိတာကြောင့် မငြင်းပဲ အလုပ်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်တခါ Counselling Course ကို သေချာ မစဉ်းစားပဲ တက်ခိုင်းတဲ့ အတွက် သူဌေးကို ဒေါသတွေ ထွက်ပြီး မသွားပြန်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးတခါတော့ ကျနော့်နဲ့ အလုပ်တူတူလုပ်ခိုင်းတဲ့ တယောက်ကို ကျနော့်ကို အလုပ်ထုတ်ဖို့ ပြောခိုင်းတဲ့ အတွက် ကျနော်ပါအလုပ်ထွက်ပါတယ်။ ကျနော့်နဲ့ မဆိုင်ပေမယ့် ကြားထဲကနေ လူကောင်ဖော်ပြီး မပြောရဲ့ တဲ့ သူ့ကို ဒေါသဖြစ်တာနဲ့ အလုပ်ပါထွက်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်နေ့စိတ်က နည်းနည်းပြေသွားတာရယ်၊ သင်တန်းတက်နေလက်စက မပြီးသေးတာရယ် ကြောင့် သင်တန်းသွားတက်တော့ သင်တန်းအ၀မှာ ချောကလက် တစ်တောင့်၊ Confirm Letter စာအိတ်နဲ့ စတားဘတ် ကော်ဖီ ဘူးလေးကိုင်ပြီး ပြုံးစိစိနဲ့ ကျနော့်ကို စောင့်နေတဲ့ သူဌေးကို တွေ့တာပါပဲ။ တော်သေးတာပေါ့ ပန်းစည်းများမ၀ယ်လာလို့။ ၀ယ်လာလို့ကတော့ လူတွေ ၀ိုင်းကြည့်ပုံနဲ့ အထင်မှားလောက်ပါတယ်။ သင်တန်းတက်နေတော့လဲ မပြန်ပဲ နှစ်နာရီခြားတခါ တံခါးခေါက်ပြီး ကော်ဖီ လာလာပို့တယ်။ သင်တန်းနည်းပြက အဲဒါဘယ်သူလဲ လို့မေးတော့ ကျနော့်သူဌေးလို့ပြန်ဖြေတာ သင်တန်းမပြီးမချင်း အိုး မိုင် ဂေါ့… ကို ဘာသာစုံနဲ့ တနေတော့တာပါပဲ။
ဒါတွေပဲလာ ဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ရုံးကိစ္စနဲ့ အပြင်သွားမယ်ဆိုရင် သူက လိုက်ပို့ချင်ပါတယ်။ သူ့ကို သွားခိုင်း ရင်တော့ သူမသွားပါဘူး။ အပြင်သွားတိုင်း သူဆီက ကတိတောင်းရပါတယ်။ စကားပြောရင် ငြိမ်ငြိမ်နေရမယ်၊ မဆော့ရဘူးဆိုတဲ့ ကတိ ရမှ သူနဲ့ ကျနော်လိုက်ပါတယ်။ တခါ သူနဲ့ Eunos က Post Office ကိုသွားပါတယ်။ ကျနော်မခေါ်ပါဘူး။ ရုံးက Poster တွေကို စာတိုက်ကနေ ပို့ဖို့သွားတာပါ။ သူကကျနော့်ကို ကူချင်တယ်ဆိုပြီးလိုက်လာတော့ မသက်သာပဲ ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ကောင်တာရောက်လို့ ကိုယ့်အရှေ့ ကလူတွေ တန်းစီနေတဲ့ အချိန်မှာ သူထေးက တိုကင် နံပတ် ထွက်တဲ့စက်ကို နှိပ်ပြီး တိုကင်ယူပါတယ်။ (အမှန်တော့ ယူစရာမလိုပါဘူး)။ ပြီးတော့ ထပ်နှိပ်ပြန်တယ်။ ဆယ်ခါလောက် နှိပ်ကစားတော့ ကောင်တာက စာရေးမက လှမ်းအော်ပါတယ်။ အဲဒါကစားစရာမဟုတ်ဘူး ဆိုမှ ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ နှိပ်လို့ ကောင်းတယ်လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ ၁၀လောက်ဝယ်တာကို ၈ ကျပ်မရရအောင် ဆစ်နေတာက ကလေးတယောက် အမေဆီက မုန့်ဖိုးတောင်တာမရလို့ စိတ်ကောက်နေတဲ့ကလေးလိုပါပဲ။ စိတ်မရှည်တဲ့ စာရေးမက ၅ ပြားလောက် စိတ်မသက်မသာနဲ့ လျှော့ပေးလိုက်တာကို တရုံးလုံးကြားအောင် ထအော်ပါတယ်။ အားလုံးက သူဌေးကို ၀ိုင်းကြည့်ပါတယ်။ ကျနော့်ကို စာရေးမက တိုးတိုးလေး အဲဒါဘယ်သူလဲမေးတော့ သူဌေးလို့ ပြောတာကို ဆံလံ ဆယ်ခါပြန်ပေးသွားပါတယ်။ သူထေးပုံစံကိုလဲ ကြည်လေ၊ ကတုံးတုံးထားပြီး ယိုးဒယားက ကြိုက်လို့ ၀ယ်လာတဲ့ ရှမ်းဘောင်ဘီးအပွကြီးနဲ့ အကျီ အပွ၊ အကျီက ကျယ်ပြီး ပြာကလောင် လို တခြမ်းစောင်းလို့ ခဏခဏ ဆွဲတင်ရတာလဲ အမော ပြီးရင် နှပ်က တရှုပ်ရှုပ်နဲ့ ပြောင်နေတဲ့ကတုံးကို ခဏခဏပွတ်နေတဲ့ သူဌေး အော်ရယ်တဲ့ပုံစံကို မျက်စိမှာပဲ မြင်ကြည့်ကြပါတော့။
ခုနောက်ပိုင်း စာရင်းတွေ လုပ်ရင် ရုံးခန်းကို လော့ခ် ချထားရတယ်။ မဟုတ်ရင် အနားလာပြီး နှုပ်တရွတ်ရွတ်နဲ့ ရေခဲချောင်းလာစားလိုက်၊ ပင်ပန်းတယ်လို့ ငြီးပြီး ခုံပေါ်မှာ လာမှောက်လိုက်နဲ့ ခဏခဏ မောင်းထုတ်ရပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်က နင်လာလို့ ငါစာရင်းမှားရင် နင်က ငါ့ကို အလုပ်ထုတ်မှာ၊ နင်အလုပ်မထုတ်ခင် နင်ထွက်သွားတာ အကောင်းဆုံးလို့ ပြောမှ ခေါင်းလေးတပွတ်ပွတ်နဲ့ ထွက်သွားတတ်တဲ့ သူထေးပါ။ အခုလော့ခ် ချထားရင်တောင်မှ၊ တခါးလေးကို ခေါက်ပြီး ထွက်ပြေးလိုက်၊ အပြင်ဘက်မှန်ကနေ အမျိုးမျိုး လာပြောင်လိုက်နဲ့ အနှောက်အယှက်ပေးတတ်ပါတယ်။ စိတ်ပျက်လွန်းလို့ တခါတခါ လဲ အော်မိပါတယ်။ တခါတခါလည်း သူငယ်ချင်းလို အခန်းထဲမှာ ပြောချင်တာတွေ ပြောပြပါတယ်။ ကျနော်ပြောရင် သူက တအောအော နဲ့ နားထောင်တတ်ပြီး ငါဒါတွေ ဘာလို့ မသိတာပါလိမ့်လို့ တအံ့တသြနဲ့ နားထောင်တတ်ပြန်တယ်။
တခါတလေ အမြင်ကတ်ပါတယ်။ တခါတလေ သနားပြန်ပါတယ်။ သူဌေးကလေးစိတ် ဆန်ပြီး အလုပ်ဖြုတ်လိုက် ခန့်လိုက်လုပ်နေတာကြောင့် သူဌေးကို သဘောကျတဲ့သူနည်းပါတယ်။ အခုလောလောလတ်လတ်လည်း အလုပ်ထွက်စာတင်ထားတဲ့သူ ရှိလို့ ကျနော့်မှာ ညတိုင်း သူမက်ဆေ့ပို့ပြီး ပြောပြောနေတာကို ဒိုင်ခံနားထောင်နေရရှာတယ်။ တကယ်တော့ အားလုံးအလုပ်ထွက်ကြတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော် အလုပ်ထွက်မှာကို ကြောက်လို့ သူခမျာ ညတိုင်း မက်ဆေ့ပို့နေရတာ အမောဖြစ်နေပါတယ်။
တယောက်ယောက်ကိုပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ဒီထက်မကပါပဲ။ ဒီနေ့တော့ သူဌေး ရုံးမလာတုန်း သူဌေးကို သတိတရနဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အားလုံးကို ပြောပြလိုက်ပါတယ်။
Writer Sein Lyan Time 11:25 am9comments: Links to this post
Labels: ကျွန်တော့်ဘဝလေးထဲမှာ, ကျနော့်အလုပ်များ
ရွေးချယ်ခွင့် ၊ ရွေးချယ်မှု
အလုပ်စ၀င်တဲ့ နေကနေစပြီး နေ့တိုင်း လိုလိုပဲ ထမင်းစားချိန်ရောက်တိုင်း ဖုကောက်ကိုသွားတယ်။ ဖုကောက်ရောက်ပြီးဆိုရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ရှိသမျှ ဆိုင်တခုချင်းစီက Menu တွေကိုဖတ်၊ ဈေးနှုန်းတွေကို လိုက်ကြည့်တယ်။ နေ့တိုင်း သွားလဲ နေ့တိုင်းပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဖတ်ပြီးတိုင်း စိတ်ထဲက အလိုလို ခေါင်းခါတယ်။ အဆင်မပြေဘူး။ တခါတလေကြတော့လဲ ဆိုင်တဆိုင်ရှေ့ မှာ အကြာကြီး မတ်တပ်ရပ်ပြီး ဘာစားရမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားမိပြန်တယ်။ ရွေးစရာတွေ များနေတော့လဲ ခေါင်းထဲမှာ ဘာစားရင်ကောင်းမလဲ ဆိုတာ ဖြစ်ပြန်ရော။
ဒီလိုနဲ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ ဘာစားနေသလဲ ဆိုတာ မသိမသာ တပတ်လည့်ပြီး လိုက်ကြည့်တယ်။ အားလုံးနီးပါးကတော့ ကိုယ်မှာထားတဲ့ ဟင်းလျာတွေကို ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် စားနေကြတဲ့ပုံပါပဲ။ သူတို့စားနေတဲ့ ထဲကမှ ဘယ်ဟင်းကို အများဆုံးမှာစားလဲ။ ဘယ်ဟင်းက ကောင်းမယ့်ပုံရှိလဲ ဆိုတာ ရှာကြည့်မိတယ်။ ပြီးတော့ ဆိုင်က Menu တွေကို ပြန်ဖတ်တယ်။ သက်ပြင်းရှည်ရှည် တချက်ချပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချတယ်။ ဘေးနားကဖြတ်သွားတဲ့ အဖွားအိုကို ခေါ်ပြီး အအေးတလုံးမှာလိုက်တယ်။ ၂ကျပ်တန်ပေးလိုက်တယ်။ ပိုတာအဖွားအတွက်လို့ ပြောလိုက်ပြီး နေ့လည်စာ အအေးကို မိန်ရည်ရှက်ရည် စားသုံးခဲ့တယ်။ ကျနော်မကြိုက်တဲ့ ထမင်းမာမာနဲ့ ဟင်းကိုစားလိုက်ရတာထက် အအေးသောက်လိုက်ရတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျေနပ်မိတာပဲ။ ဒါကနေ့တိုင်းလိုလိုဖြစ်တယ်။
ကျနော့်လို လူမျိုးတွေ ရှိသေးရဲ့လားလို့ သိချင်တယ်။ ပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်။
တခါတလေ အမြဲတမ်းလိုလို ပဲ လူတွေက ကိုယ့်ဘ၀ကို အလိုမကျတဲ့ အခါကျရင် တခြားလူတွေရဲ့ ဘ၀တွေကို လှမ်းမျှော်ကြည့်တတ်ကြတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ တွေဆီက လှပတဲ့ဘ၀လေးကို လိုချင်တက်မက်ပြီး ငါသာဒီလိုဘ၀သာရရင် ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးတောတတ်ကြတယ်။ အဲဒီအခါကျရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဒေါသတွေထွက်ပြီး ငါကျတော့ ဒါတွေဘာလို့ မပိုင်ရတာလဲ၊ ငါ့အလှည့်ကျတော့ ဒါမျိုးတွေ ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ ၊ ငါဒါမျိုးမလုပ်နိုင်တာလဲ လို့ တွေးမိကြပြန်တယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်သုံးသပ်ကြည့်တယ်။ ကိုယ်ကိုယ့်ကိုယ် တောင်းဆိုတာတွေ ဘယ်လောက်တောင်များနေလဲ။ ကိုယ့်အတွက် ဘာတွေမျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေလဲဆိုတာတွေပေါ့။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့သူတွေ ရယ် သူတို့မှာ ရှိသင့်သလောက်ရှိပြီးကိုယ့်မှာ မရှိတဲ့အခါတွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တောင်းဆိုမှုတွေ ပိုများတတ်လာတယ်။ ကိုယ့်ထက်ပိုတော်တဲ့သူ၊ ကိုယ့်ထက်ပိုလုပ်နိုင်တဲ့သူ၊ ကိုယ့်ထက်ပိုအောင်မြင်တဲ့သူ၊ ကိုယ်ထက် ပိုလှူနိုင်တဲ့သူ တယောက်ယောက် အမြဲ ရှိနေဦးမယ်ဆိုတော့ ကိုတော့ မေ့ထားလိုက်ကြတယ်။ သူတို့တွေက ဘ၀စာမျက်နှာတွေမှာ အမြဲရှိနေဦးမှာပဲ။
ကျနော်မျှော်လင့်မိတာကတော့ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အရေအချင်းတွေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိဖို့နဲ့ ကိုယ်မှာရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းနဲ့ ကိုယ်ဘယ်သူဆို တာ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ပြသဖို့ပါပဲ။ ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ထုတ်ပြချင်းက ကြွားဝါးတယ်လို့ မထင်မိပါဘူး။ ကိုယ်ကသာ တခြားလူတယောက်ရဲ့ ဘ၀ထဲကို ထိုးဝင်ကြည့်ပြီး မနာလို ၀န်တိုစိတ် မဖြစ်ဖို့သာ အဓိကပါ။ သူတို့ဆီက သင်ယူပြီး ကိုယ့်အတွက် ရိုးရှင်းစွာ အသုံးချတတ်ဖို့ပါပဲ။ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ကျေနပ်စွာနဲ့ အောင်ပွဲခံလိုက်ပါ။
ကျနော့်အနေနဲ့ကတော့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ စားနေတဲ့သူတွေကို ကြည့်ပြီး သူတို့စားတာလိုက်စားမယ်ဆိုပြီး တခါမှ မတွေးခဲ့ဖူး။ သူတို့စားပေမယ့် ကိုယ်မကြိုက်တာကို အတင်းကြိတ်မှိတ်ပြီး မစားနိုင်ဘူး။ လုံးဝမကြိုက်ရင် လုံးဝ မစားဘူးပေါ့။ အဟာရ မဖြစ်ရင်နေပါစေ။ နောက်ဆုံး စိတ်မတိုင်းမကျစွာနဲ့ ရွေးလိုက်ရတဲ့ အအေးတခွက်က ကျနော့်ရင်ကိုတော့ အနည်းဆုံး အေးမြသွားပါတယ်။
ဘ၀မှာစိတ်တိုင်းမကျတာတွေ များစွာထဲက ကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းကျတဲ့ အရာတခုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါစေ။
Writer Sein Lyan Time 7:19 am4comments: Links to this post
Labels: ကျွန်တော့်ဘဝလေးထဲမှာ, စိတ်ကူး, မျှဝေခြင်း
ချစ်စိတ် မုန်းစိတ် ကိုယ့်စိတ်
ကျနော် စဉ်းစားမိတာ တခုပေါ့။ နေ့တိုင်း မြင်နေကြားနေကျတွေပါပဲ။
အဲဒီကောင်မလေးက ချစ်ဖို့ ကောင်းလိုက်တာ။ ငါ အရမ်းချစ်တာပဲ။ သူပြုံးနေတာကို ကချစ်စရာ။ သူလမ်းလျှောက်နေတာကို က သိပ်ကျက်သရေ ရှိတာပဲ ဆိုပြီး မတွေ့ဘူး မသိဘူးပဲနဲ့ ချစ်စိတ်ဝင်တတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ အဲကောင်မလေးက သွားလေးတွေ ဖွေးလို့ ချစ်ဖို့ ကောင်းပေမယ့် အနားကပ် စကားပြောရင် တံတွေးတွေ အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် ထွက်ချင်ထွက်မယ်။ အစားစားရင် ပကျပ်..ပကျပ် နဲ့ အသံတွေ မြည်လိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါရော အဲဒီကောင်မလေးကို ချစ်ဦးမှာလား။ (အကျင့်တူရင်တော့ ခွင့်လွှတ်တတ်ကြမှာပေါ့လေ။)
တချို့ကြတော့ “ဟိုမသာကြီး.. ရုပ်ကိုက ကျက်သရေကို မရှိဘူး။ စကားပြောလဲ ဆောက်ကြွကြွနဲ့..။ သူ့လုပ်စာများ ငါတို့ ထိုင်စားနေတယ်လို့ ထင်လား။ သူ့ သောက်ရုပ်ကိုကြည့်မယ့် အစား ငါ ချီးပုံပဲ ပြေးကြည့်တော့မယ်” ဆိုပြီး နေရင်းထိုင်ရင်း မုန်းတတ်ကြပြန်တယ်။ တန်ရာတန်ရာ ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေကွ ချီးပုံပဲ ကြည့်ပေါ့။ မသာလို့ အခေါ်ခံရတဲ့ သူက ချစ်မွှေးမပါပေမယ့် သူ့မှာ ကောင်းတဲ့ အချက် ရှိဦးမှာပဲ။ ဖြည့်တွေးကြည့်ဖူးလား။ မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး ဘူးပဲ အော်နေမှာပဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရော…. ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ် မှန်ထဲကြည့်ပြီး “ဟဲ့.. သေနာမ… နင့်ရုပ်ကိုကကျက်သရေ မရှိဘူး မုန်းဖို့ကောင်းလိုက်တာ ၊ရွံ့စရာကြီး လို့ ပြောဖူးလား၊ ဒါမှ မဟုတ် “ငါအရင်ကနဲ့ မတူဘူး၊ ချောလာသားပဲ” ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်လာတတ်ဘူးလား။ မှန်ကြည့်ပြီး မပြောဘူးရင်တောင်မှ အတွေးနဲ့ တနေ့ မဟုတ် တနေ့တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်ကြည့် မုန်းကြည့်ကြမှာပဲ။
ဥပမာပေါ့…. တခါတလေ မှန်ကြည့်နေရင်းမှ ကိုယ့်မျက်ခုံးလေးက ထူနေတာပဲ ၊ ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းလေးက ဆေးမထိုးပဲ ရဲ နေတာပဲ လို့ တွေးရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်စိတ်တွေ ၀င်လာတတ်သလို၊ တခါတရံ အိမ်သာမှာ ချီးညှစ်နေရင်းနဲ့လဲ ဘာလို့ ငါ့ကျမှ ဒီချီးက လာတစ်နေတာလဲ ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မုန်းနေတတ်ပြန်တယ်။ တခါတရံ သူများ မလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်တခုကို လွယ်လွယ်လေးနဲ့ လုပ်နိုင်ခဲ့ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကျိတ်ပြီး ချီးကျူးမဆုံး၊ ချစ်လို့ မ၀ ဖြစ်နေတတ်သလို၊ ကိုယ်ကြည့်မရတဲ့ သူရှေ့ မှာ ကိုယ် တခုခု အမှားလုပ်မိပြီး ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ၀မ်းနည်းလို့ မဆုံး ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပြစ်တင်လို့ မဆုံး၊ မုန်းလို့ မ၀နိုင်အောင် ဖြစ်နေတတ်ပြန်တယ်။
ဒါကတော့ လူတိုင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တခြားလူကို ချစ်ဖို့၊ မုန်းဖို့ မဆိုထားနဲ့ ကိုယ်တိုင်တောင် တနေ့ တနေ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ချစ်လိုက်၊ ပြန်မုန်းလိုက်နဲ့ မသိမသာ သံသရာလည်နေတတ်တာပဲလေ။
ကျနော်လဲ ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ တနေ့ တနေ့ ဘယ်လို အရာတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်မိနေပြီး ဘယ်လို အရာတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မုန်းနေလဲဆိုတာကိုပေါ့။
ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ကျိတ်ချစ်မိနေတတ်တဲ့ အချိန်တွေက
ကျနော့်ကို ကြည့်မရတဲ့သူတွေ အရှေ့ မှာ ကျနော့်ကို မုန်းတဲ့သူတွေ အရှေ့ မှာ သူတို့ ထင်သလို သူတို့ ပြောသလို ခပ်ရွဲ့ ရွဲ့ လေး နေပြတတ်တာ ကို ကျနော်ချစ်တယ်။
၀မ်းနည်းရင်တောင် ပြုံးပျော်နေတတ်ပြီး၊ ပျော်နေရင်းနဲ့ ၀မ်းနည်းချင်ယောင် ဟန်ဆောင်တတ်တဲ့ အချိန်ကို ကျနော်ချစ်တယ်။
တယောက်ယောက်ကို စိတ်ထဲ ရှိတိုင်း ပြောတတ် ဆိုတတ် တဲ့ အကျင့်ကို ချစ်တယ်။
ကျနော်ချစ်တဲ့သူတွေကို ကျနော် အချစ်တွေ ထုတ်ပြရဲတဲ့ အကျင့်ကို ကျနော်ချစ်တယ်။
လုပ်ချင်တာကို လုပ်တတ်ပြီး လုပ်ခွင့်ရနေတာကို ချစ်တယ်။
အစားအသောက် ကောင်းကောင်းကြိုက်တတ်တဲ့ အကျင့်ကို ချစ်တယ်။
အ၀တ်အစား အကောင်းစားတွေမှ ကြိုက်တတ်တဲ့ အကျင့်ကို ချစ်တယ်။
လှလှပပ ကြွားတတ်တဲ့ အကျင့် ရှိတာကို လဲ ချစ်တယ်။
တခုခုကို လုပ်ချင်ပြီး ဆိုရင် နာရီ စက္ကန့် မခြား လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ကို ချစ်တယ်။
စည်းကမ်းရှိတဲ့ အကျင့် ရှိတာကို ချစ်တယ်။
စပ်စပ်စုစုနဲ့ တခြားတယောက် စိတ်ကို လေ့လာတတ်တာ ကိုချစ်တယ်။
တယောက်ယောက်ကို လှလှပပ သင်ခန်းစား ပေးတတ်တဲ့ အကျင့်ကို ချစ်တယ်။
ဆရာလုပ်တတ်၊ ဦးဆောင်ဦးရွက် လုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိတာကို ချစ်တယ်။
ကျနော့်ကိုယ် ကျနော် မုန်းတာက
အိမ်သာတက်ချင်ပေမယ့် လူသံကြားရင် ချီးညှစ်တိုင်း မထွက်တော့တဲ့အချိန်
ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကို မတင်မကျ ချနေရတဲ့အချိန်
လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တခုကို အဆုံးသတ်ခွင့် မရလိုက်တဲ့ အချိန်
စိတ်မပါလက်မပါနဲ့ အလုပ်တခုကို မပြီးပြီးအောင်လုပ်ရတဲ့ အချိန်
ဒေါသကို ဆောက်တည်မရစွာ ထွက်တဲ့ အချိန်
အမှားတခုလုပ်ပြီးရင် နောင်တရလို့ မဆုံးတဲ့ အချိန်
လူတယောက်ကို သနားပြီး ချစ်မိပြီးဆိုရင် အသေရရ အရှင်ရရ အသည်းအသန်ဖြစ်တတ်တဲ့ အချိန်
မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် မရှိတတ်တဲ့ အကျင့် တွေကို မုန်းမိတယ်။
ဒါထက်မက ကိုယ့်မသိစိတ်က ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်နေ မုန်းနေတဲ့ တာရှိချင်ရှိဦးမှာပေါ့။
နေတိုင်းနေ့တိုင်းတော့ အိမ်သာတက်တိုင်း မထွက်တဲ့အချိန်နဲ့ ခေါင်းကိုက်နေတတ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မုန်းပြီး သဌေးကို ပညာသားပါပါ ဆရာလုပ်ခွင့် ရပြီး အိမ်မှာ ဗိုလ်လုပ်ခွင့် ရနေတဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ချစ်နေမိတာပါပဲ။
ကဲ…. ပိတ်သတ်ကြီးလဲ ကိုယ့်ရဲ့ ဘယ်စိတ်ကို ချစ်ပြီး ဘယ်စိတ်ကို မုန်းသလဲ ဆိုတာ သေချာစဉ်းစားရင် မှန်ကြည့်လိုက်ပါကုန်……။
Writer Sein Lyan Time 7:53 pm3comments: Links to this post
Labels: ကျွန်တော့်ဘဝလေးထဲမှာ, ကျနော့်အကြိုက်, ခံစားချက်သက်သက်
စကာင်္ပူက လူတွေ ၊ အထူးသဖြင့် သထေးတို့လို ၊ နေရာ တနေရာ ရထားတဲ့သူတွေက ဖုန်းလေးပြော လက်မှတ်လေးထိုး ရင်ဖြင့် ပင်ပန်းလိုက်တာ၊ အရမ်းပင်ပန်းတဲ့ အလုပ်ကို တာဝန်ယူထားရတာ ဆိုပြီး ညည်းလေ့ရှိတယ်။ ကျနော်လိုများ သူတို့ ဘ၀အစုံစုံ နေရာ အစုံစုံ အလုပ်လုပ်ခဲ့ရမယ်ဆို ရင် ဘယ်လိုများနေလဲ ။
ကျနော် (၁၉၉၇) မှာ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ အောင်တယ်။ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ ဖြေပြီးကတည်းက ရန်ကုန်ကို ခြေချဖြစ်တယ်။ ဘ၀အတွက် ရည်ရွယ်ချက် ကြီးကြီးမားမားထားလို့ပေါ့။ ကွန်ပြူတာသင်တန်းတွေတက်တယ်။ စာရင်းကိုင် သင်တန်းတွေ တက်တယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားပြော သင်တန်းတွေ တက်တယ်။ အဲဒီတုန်းက ရေပန်းစားတဲ့ သင်တန်းမှန်သမျှ မတက်ဖူးတဲ့ သင်တန်းရယ်လို့ မရှိဘူး။ သိမ်ကြီးဈေး က MCC ကို အလုပ်အကျွေးပြုတယ်။ ရိုသေသမှုနဲ့ အသစ်မှန်သမျှ သင်တန်းကို မရိုးတန်းတက်တယ်။
သင်တန်းတွေ ပြီးလို့ ဘာတတ်လဲ မေးရင်တော့ အားရစရာပဲ။ ဘာမှ မယ်မယ်ရရ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောရမလိုပဲ။ ကြိုတင် နှာခေါင်းမရှုံ့ ပါနဲ့။ စကား ပလင်ခံတာပါ။ အခုမှ စကြွားပါတော့မယ်။
LCCI level3ကို Accounting နဲ့ ဒီပလိုမာ ရပါတယ်။ IDCS အောင်ပါတယ်။ IELTS ဖြေတာ overall6ရပါတယ်။ အနုပညာ ကွန်ပြူတာ ဒီပလိုမာ ရပါတယ်။ သိပ်များသွားသလား။ လျှော့လိုက်ပ့ါမယ်။ (၁၉၉၇)နှစ်မှာ မြန်မာ တနိုင်ငံ လုံး မြန်မာစာ ဘာသာမှာ ဒုတိယဆု ရခဲ့တာကိုတော့ အရေးတယူ ထည့်မရေးတော့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေ စဖွင့်တော့ နိုင်ငံခြား ဘာသာ တက္ကသိုလ်မှာ အင်္ဂလိပ်စာ မေဂျာရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းစတက်တဲ့နေမှာ အငန်းလွန်ပြီး ပြင်သစ်မေဂျာ ကို သွားတက်ကြည့်မိတာ ပြင်သစ်စာပဲ သင်တော့ မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဖြစ်သွားပြီး ပြင်သစ်စာကို သုံးနှစ်စာ သင်ယူပြီး အမိမြန်မာပြည်က ဘွဲ့ ကို ဂုဏ်ယူစွာ ရယူခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းတွေ ပြီးတော့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ သွားဖို့ အပတ်တကုတ်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလန် နိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး ပညာဘွဲ့ သင်မယ် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့။ အင်္ဂလန် ဗီဇာဝင်လို့ reject ဖြစ်ပြီးတော့ တခါမှ မကြားဖူး၊ မြေပုံထဲမှာတောင် မတွေ့ဖူးတဲ့ Cyprus နိုင်ငံကို မျက်စိလည် လမ်းမှား ပြီး ရောက်သွားတာပါပဲ။ လမ်းမှာတယ် ဆိုပေမယ့် လမ်းမှန်မယ် ထင်ပြီး ရွေးခဲ့တာပါပဲ။ ကံအကျိုးပေးက ဒီလို ဖြစ်လာတော့ မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့။ ဒီအပြင် Cyprus မှာ သင်ရတဲ့ ကောလိပ်မှာ စီးပွားရေးပညာ မရှိပဲ Design နဲ့ ပတ်သက်တာတွေပဲ ရှိတော့ စိတ်ဝင်တစား ရှိနိုင်မယ့် Graphic Design ကိုပဲ ရွေးခဲ့ပါတယ်။
Cyprus နိုင်ငံမှာ ရပ်တည်မှု တခု အတွက် ၀မ်းစာရေးဖြေရှင်းဖို့ အတွက် လုပ်ရတဲ့ အလုပ်ကတော့ စားသောက်ဆိုင်၊ ခြံရှင်း၊ အိမ်ရှင်းနဲ့ ဆေးသုတ်တဲ့ အလုပ်ပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ Cyprus မှာ ၂၀၀၄ကတည်းက ဘ၀စခဲ့တာ ၂၀၀၉ နှစ်ကုန်တဲ့ အထိပေါ့။
ဘ၀က ထပ်ပြီးပြောင်းလဲချင်ပြန်တော့ ၂၀၀၉ မှာစကာင်္ပူကို သုံးပတ် တလ အလည်လာပါတယ်။ သုံးပတ် တလကနေ အလည်လွန်ပြီး စကာင်္ပူမှာ နေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အစတော့ အလုပ်ရှာ မရရင် ပြန်မယ် ဆုံး ဖြတ်ပြီးကာမှ မပြန်စေချင်တဲ့သူတွေနဲ့ ၊ မပြန်ချင်သေးတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ ကျောင်းအပ်ခဲ့ပါတယ်။ Cypurs မှာ သင်ခဲ့တာနဲ့ နည်းနည်းနီးစပ်တဲ့ Design ပညာကိုပဲ ထပ်သင်ခဲ့ပါတယ်။ တနှစ်ပြည်လို့ ကျောင်းပြီးခါနီးမှာ အလုပ်ထပ်ရှာပါတယ်။ အလုပ်မရရင် ဆိုက်ပရပ်စ် ပြန်တော့မယ် ဆိုပြီး ဆုံး ဖြတ်ပြီးကာမှာ ကောက်ကာငင်ကာ အလုပ်အင်တာဗြူးရပါတယ်။
ဆိုက်ပရပ်စ်မှာ ပင်ပန်းပေမယ့် ပိုက်ဆံရတယ်။ နေရထိုင်ရတာ ဒီထက်သာတယ်လို့ သာသာလေး ပိုတွေးချင်ပါတယ်။ ဒီမှာတော့ အဲယားကွန်းခန်းမှာ ထိုင်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ ပေါင်းမှ ပိုက်ဆံရပါတယ်။ ဆိုက်ပရပ်စ်မှာကျ ကာယအားနဲ့ ရင်းပြီးမှ ပိုက်ဆံရပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု မရှိပဲ ပိုက်ဆံပိုရပါတယ်။ အထီးကျန်ပါတယ်။ ဘယ်အရာမဆိုတော့ အကောင်းနဲ့ အဆိုး ရှိတာပါပဲ။
ကျောင်းတက်နေစဉ်တုန်းက အလုပ်အင်တာဗြူးတွေ သုံးလေး ငါးခု ရလို့ သွားခဲ့ပေမယ့် သထေးနဲ့ စကားများခဲ့တာရယ်၊ ကျနော်က သဘောမကျတာရယ်၊ သူတို့ဘက်က မကြိုက်တာရယ် အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံး သွားခဲ့တဲ့ အင်တာဗြူးက ဘာမှ မမေးပဲ အလုပ်တန်းခန့်ခဲ့ပါတယ်။
ရတဲ့ အလုပ်က Charity Organization ပါ။ မိဘမဲ့ ကလေးတွေနဲ့ ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ ကလေးတွေကို ကျောင်းစရိတ် ထောက်ပံ့ပေး၊ ဆိုးတဲ့ကလေးတွေကို ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ လုပ်ငန်းတခုပါ။ ကျနော် တက်ခဲ့တဲ့ Design ပညာနဲ့ ဘာမှ သိပ်မဆက်စပ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီအလုပ်မှာ Website လေးခုကို ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ တလ တခါ ရှိတတ်တဲ့ Event လေးတွေကို ပိုစတာထုတ်ဖို့ အတွက်ခေါ်တာပါပဲ။ ဘာမှ သိပ်လုပ်စရာမလိုတဲ့ အလုပ်တခုပါ။ ကျနော်သင်ခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်းပညာကို အပြည့်အ၀ အသုံးချလို့ မရတဲ့ နေရာပေါ့။ နောက်ပြီး ကျနော်နဲ့ သိပ်ဆက်စပ်မှု မရှိတဲ့ (သိပ်ပြီးလဲ မသင်ချင်ခဲ့တဲ့) website တွေကို လုပ်ရတာပါပဲ။
သိပ်ပြီး အလုပ်မများတတ်တဲ့ကျနော့်ကို သထေးက Finance ရာထူးကိုပါ တိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ Organization ကိုဝင်သမျှ အလှူငွေတွေ ၊ တွက်သမျှ အသုံးစရိတ်တွေကို မှတ်၊တွက်၊ရတဲ့ စာရင်းအလုပ်ပေါ့။ ဒါကလဲ အရင်က ရခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီပလိုမာကြောင့်ပေါ့။ နောက်မဟုတ်ရင် အလုပ်ပြုတ်နိုင်ပါသေးတယ်။
အဓိက ပြောချင်တာကတော့ ဘ၀ ဆိုတာ မထင်မှတ်ပဲနဲ့ ပြောင်းလဲလွန်းတယ်။ တခြားလူတွေ အတွက် မဟုတ်ပေမယ့် ကျနော့်အတွက်တော့ အမြဲပြောင်းလဲနေတယ်။ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် ကိုက်တယ်ဆိုတာ နည်းလွန်းတယ်။ ဒါလုပ်ပေမယ့် တခြား အရာ ဖြစ်သွားတာက များတယ်။ ဒီတော့ နောက်ပိုင်း သိပ်ပြီး မျှော်လင့်ချက် မထားမိတော့ဘူး။ ကျတဲ့နေရာမှာ ကျသလို သရုပ်ဆောင်လိုက်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် သိပ်ပျော်နေလားမေးရင်တော့ မှားမယ်။
လမ်းတခုကို သေချာ လိုက်ပါလားလို့ မေးရင် တလမ်းတည်းကို သိပ်သွားချင်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်က အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်ချင်ပေမယ့် သီသီလေးလွဲလို့ အီမေဂျာ ရောက်ခဲ့ရသလိုပေါ့။ အင်္ဂလန်သွားချင်ပေမယ့်လည်း ဆိုက်ပရပ်စ် ရောက်ခဲ့သလိုပေါ့။ တခုခုကို စူးစိုက်ပြီး အာရုံထားလုပ်ရင် ရပါတယ်လို့ ပြောကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် တခါတလေ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါက ပြောင်းလဲသွားပြန်ရော။ ကိုယ့်အမှားလဲ ပါသလို ဘ၀ပေး ကုသိုလ် လဲပါတာပဲလေ။ မလုပ်မဖြစ်တဲ့ အခြေအနေကျ လုပ်လိုက်ရတာပဲ။ ဒါကို အမှားလို့ ပြောရင်လဲ ခံရုံပေါ့။
အခုဒီအလုပ်လေးမှာ လုပ်သက်လပိုင်းလေး ရလာတော့ အလုပ်ကနေ ကျောင်းတက်ဖို့ Offer လုပ်ပါတယ်။ ဘွဲ့ ရထားတဲ့ ကျနော့်ကို မာစတာ တခုခုတက်ဖို့ ပြောပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ ပေါင်းထားတဲ့ အဖွဲ့ ဆိုတော့ ကျနော်ကျောင်းတက်ရင်လဲ Organization က ပိုက်ဆံမကုန်ပါဘူး။ အစိုးရကနေ ထောက်ပံ့ပေးတာပါတဲ့။ ကျနော်လဲ ၀မ်းသာအားရနဲ့ ကျနော် စိတ်ဝင်စားတဲ့ Course တွေ ရွေးပါတယ်။ ဒီတခါတော့ တလမ်းတည်းလိုက်တော့မယ် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Design နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Course တွေ ကျောင်းတွေကို ရှာပါတယ်။
နောက်နေ့ ရုံးတက်လို့ သူထေးကို ကျနော်တက်ချင်တဲ့ Course တွေ ကျောင်းတွေကို ပြပါတယ်။ အဲဒီအခါကျမှ သူထေးက ပြုံးပြုံးနဲ့ ကျနော်က Youth Organization မှာ လုပ်တာ၊ ဒါကို အစိုးရက ထောက်ပံ့ပေးတာ၊ ဒီ Organization မှာ လုပ်တဲ့သူတွေက ဒီအလုပ်ကို အထောက်အပံ့ပေးမယ့် ကျောင်းတွေကိုပဲ တက်ရမယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြောပါတယ်။ အစိုးရက ဖွင့်ထားပေးတဲ့ ဒီကျောင်းတွေကို တက်မှ ကျနော်က တက်ရင် ပိုက်ဆံမပေးရမယ့် အကြောင်း၊ ကျနော် တက်ချင်တဲ့ကျောင်းကို တက်ရင် ကျနော်ပိုက်ဆံပေးရမယ့် အကြောင်း ပြောပါတယ်။
သူထေးကိုယ်တိုင် ကျနော့်ကို တက်စေချင်တဲ့ Course ကတော့
(1) Master In Counseling Psychology
(2) Master In Counseling & Guidance
(3) Master In Social Work
(4) Master In Applied Psychology ( For Youth)
ကဲ…. ကျနော် ဒီ Organization မှာ မဖြစ်မနေ အလုပ်ဆက်လုပ်ရတော့မယ် ဆိုရင်တော့ ဒီထဲက Course တခုခုကို ကျနော် သေချာပေါက်တက်ရတော့မယ်လေ။ ဒါမှ မဟုတ် အလုပ်ပဲ ပြောင်းရမလား။ လက်ရှိလုပ်တဲ့ အလုပ်က အမှန်ပြောရရင် ကျနော့် အတွက် က အဆင်ပြေတယ်။ ကျနော်တက်ချင်တဲ့ ကျောင်းတက်ရင်တော့ ကိုယ့်ပိုက်ဆံကိုယ်ပေးတက်ရမှာပဲ။ ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုပဲ လား …။
အဖေပြောသလိုပဲ…။ ဖြစ်ချင်တော့ အင်ဂျင်နီယာ။ ကျောင်းတက်ခွင့် ရတော့ အင်္ဂလိပ်စာ မေဂျာ။
တကယ်တမ်း သင်တော့ ပြင်သစ်စာ၊ သွားချင်တာက အင်္ဂလန်၊ ရောက်ခဲ့တာ ဂရိနိုင်ငံ။
ကျောင်းတက်ပြန်တော့ ဒီဇိုင်းပညာ၊ အလုပ်ရတော့ Charity Organization မှာ။
တကယ်အများဆုံး တာဝန်ယူ လုပ်ရတာ Finance အပိုင်းမှာ။
အခု ကျောင်းတက်ခွင့် လေးရပြန်တော့ Counseling for youth တဲ့။
တကယ် စိတ်ထဲမှာ လုပ်ချင်တာက စားသောက်ဆိုင်လေး ဖွင့်ချင်တာ။
အခုတော့ တခုပြီး တခု ပြောင်းလဲနေတာပဲ။ နောင်လဲ ဘာတွေ ပြောင်းလဲပြီး ဘာအလုပ်တွေလုပ်၊ ဘယ်နိုင်ငံရောက်မလဲ ဆိုတာ မသိသေးတာပဲ။ သေခြာတာက မြန်မာပြန်မှာ အခြေမချဘူး ဆိုတာပဲ။ ကျနော့်အိမ်က ဘယ်မှာရှိလဲမေးရင် ဆိုက်ပရပ်စ်မှာ လို့ပဲ ပြောမယ်။ အချိန်တန်လို့ ပြန်ရမယ်ဆိုရင် ဆိုက်ပရပ်စ် ကိုပဲ ပြန်မယ်။
အခုတော့ လူဘ၀ ဇာတ်ခုံကြီးမှာ ကျရာနေရာက ဆက်ကလိုက်ပါဦးမယ်။
Writer Sein Lyan Time 4:08 pm 13 comments: Links to this post
ဒီမနက် ဇွန်လရဲ့ မိုးခြိမ်းသံတွေက အရမ်းကို ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ မိုးကလဲ မနက်စောစောကို အငြိုးတကြီးနဲ့ ရွာနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိုးတွေကို အံတုပြီး ကျနော်တို့ ညီအကို မောင်နှမလေးယောက် သွေးသွားလှူခဲ့ပါတယ်။ ဒီတခါသွေးသွားလှူတွေ woodland က HSA မှာ ပထမဆုံး အကြိမ်လှူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ လေးယောက်လုံးက ဒီတခါ လှူတာပါ ပေါင်းရင် ၅ကြိမ် တိတိ ရှိပြီးဆိုတော့ ကျနော်တို့ အမှတ်တရ (၅)ကြိမ် လှူပြီးကြောင်း အမှတ်တရ တံဆိပ်လေးတွေ ရပါတယ်။ နောက်ထပ် အမှတ်တရက အဲဒီသွေးလှူဘဏ်မှာ ဆေးစစ်တဲ့ မြန်မာ ဆရာဝန်မက ကျနော်ကို ပထမဆုံး သွေးလှူခွင့်ရအောင် ကူညီပေးတဲ့ ဆရာမပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးသွားလှူတိုင်းလဲ သူ့နဲ့ ဆုံပါတယ်။ ဒီတခေါက်လဲ မထင်မှတ်ထားပဲ ပြန်ဆုံခွင့် ရလို့ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သွေးလှူခွင့်ရအောင် ကူညီတယ် ဆိုတာက မနှစ်က မြန်မာနှစ်သစ်ကူးမှာ ကျနော်တို့ ညီအကိုတွေ ပထမဆုံး အနေနဲ့ အမှတ်တရသွေး သွားလှူပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျနော်က ဆိုက်ပရပ်စ်က ရောက်တာ သိပ်မကြာသေးတဲ့ အတွက် ဥရောပက လာတဲ့သူတွေက သွေးလှူခွင့် မရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အင်္ဂလန်တို့ ဂျာမနီတို့ကနေလာတဲ့ သူတွေက သွေးလှူခွင့်မရှိပါဘူး။ သူတို့ဆီက ဒေါင့်သန်းရောဂါပိုး ပါလာနိုင်တယ်လို့ ဆိုပြီး သွေးလှူဘဏ်က လက်မခံပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်လာတဲ့ နိုင်ငံက သူတို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံထဲမှာ မပါတဲ့ ဆိုက်ပရပ်စ်က ဆိုလို့ ကျနော့်ကို သွေးလှူခွင့် ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲလိုလှူခွင့် ရအောင် မြန်မာဆရာဝန် အမက ၀ိုင်းပြောပေးလို့ ကျနော်ဖြစ်ချင်တဲ့ လှူချင်တဲ့ ဆန္ဒပြည့်ဝခဲ့ပါတယ်။ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သွေးလှူတာက စကာင်္ပူရောက်မှ ပထမဆုံးအကြိမ် လှူ ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆယ်တန်းအောင်စကတည်းက ရပ်ကွက်ထဲမှာ သွေးအရမ်းလိုတဲ့ ကလေးမလေးတစ်ယောက်ကို သနားပြီး လှူခဲ့ပါတယ်။ သုံးလတခါ လိုတဲ့ သွေးကို ကျနော်လှူခဲ့ပါတယ်။ ခုအဲဒီကောင်မလေးက နေကောင်းလို့ ဒီတခေါက်ပြန်တဲ့ အချိန် အိမ်ထောင်ကျနေပါပြီး။ ကျနော့် ဆီက သွေးပဲ ယူဖြစ်ခဲ့လို့ ကျနော်လိုပဲ စိတ်ကြီးတယ်လို့တော့ ဆိုပါတယ်။
ဆိုက်ပရပ်စ်ရောက်တော့လည်း မှတ်မှတ်ရရ ကျနော့် အလုပ်ရှင်သထေး ကိုသွေးလှူခဲ့ပါတယ်။ မထင်မှတ်တဲ့ တညမှာ သထေးက ရုတ်တရက် အစာအိမ်ပေါက်တာလား၊ သည်းခြေပေါက်တာလားမသိပဲ ဗိုက်တခုလုံး မဲလာပြီး သွေးတွေ အန်လို့ သထေးမိန်းမနဲ့ ကျနော် သထေးကို ဆေးရုံတင်လိုက်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က သွေးအလောတကြီးလိုအပ်တယ် ဆိုတော့ ကျနော်ကလှူမယ်ပြောပါတယ်။ ချက်ချင်းပဲ ကျနော့်သွေးကို စစ်ပါတယ်။ သထေးကံကောင်းချင်တော့ ကျနော့်နဲ့ သွေးချင်တူတာရယ်၊ သွေးလှူလို့ရတဲ့ အနေအထားရှိတာရယ်၊ ကျနော်ဆီက ရသလောက်သွေးကိုယူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ သူတို့ဆီမှာ ရှိတဲ့ သွေးနဲ့ ကျနော့်ဆီက ယူတာနဲ့ သထေးက နေပြန်ကောင်းသွားပါတယ်။ ကျနော့်ဆီက ရနိုင်သလောက် ယူလိုက်တာဆိုတော့ အဲဒီတညလုံး ကျနော် အားဆေးပြန်သွင်းပြီး မထနိုင်ခဲ့ဘူး။ နေလည်လောက်ကျတော့ သထေးက ကျနော့်ကုတင်ကို လာပြီး ကျနော်နေကောင်းလား သတင်းလာမေးရတဲ့ အဆင့် ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ၀မ်းလဲသာတယ်။ ပီတိလဲ ဖြစ်ရပါတယ်။ အမှတ်တရလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခုလဲ စကာင်္ပူရောက်တဲ့ အချိန် တနှစ်ကျော်ကျော်လေးမှာ သွေးလှူခဲ့တာ ငါးကြိမ်ရှိပါပြီး။ ငါးကြိမ်ဆိုတော့သွေးလှူဘဏ်က ပြောတဲ့ စကားနဲ့ ဆို (၁၅)ယောက်ကို အသက်ကို ကယ်နိုင်ခဲ့ပြီးပေါ့။ ပီတိဖြစ်ပါတယ်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
အကိုဆရာဝန် တယောက်ကတော့ သွေးလှူတာ အားမပေးဘူး။ သေမယ့်လူနာကို ပိုခံစားရအောင် လုပ်သလိုပဲ လို့ ဖဘမှာ ရေးထားတာ တွေ့လိုက်ဖူးတယ်။ ကျနော်တို့ သွေးတွေက အဲဒီလို သေခါနီး သေတော့မယ့် လူနာတွေ ဆီရောက်သွားရင်တော့ စိတ်မကောင်းစရာပေါ့။ သူတို့ အတွက် အသုံး မတည့်ဘူး၊ သူတို့ကို နှိပ်စက်သလို ဖြစ်နေတဲ့ အလှူမျိုးတော့ မဖြစ်ချင်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ကျနော်တို့ သွေးတစက်ကြောင့် တယောက်ယာက်က လောကကြီးမှာ အသက်ဆက်ရှင်ခွင့်ရမယ်၊ သူလုပ်ချင်တာတွေ ဆက်လုပ်ခွင့် လေးရသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့ လှူခဲ့တဲ့ သွေးက တကယ်လိုအပ်တဲ့ သူတွေ ဆီရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ကြောင့် တယောက်ယောက် ကျန်းမာလာတာ ၊ သူတို့ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတခု ဖြည့်ဆီးပေးနိုင် တာကို ဂုဏ်ယူလိုက်ပါတယ်။
နောက်ထပ်လဲ ကျနော်အသက်ရှင်နေသ၍ လိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက် ကျနော်လှူသွားပါဦးမယ်။ ဒီနေ့ ကျနော်နဲ့ အတူ ငါးကြိမ်တိုင်တိုင် အမှတ်တရ တူတူလှူခဲ့ကြသူတွေက တောင်ပေါ်၊ သက်နိုင် နဲ့ မိုးခါးတို့ပါ။ကျနော်တို့ရဲ့ သွေးစက်တွေနဲ့ တကယ်လိုအပ်တဲ့ လူနာရှင်တွေကို လှူဒါန်း ကယ်တင်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း….
Writer Sein Lyan Time 12:49 pm4comments: Links to this post
Labels: ကျွန်တော့်ဘဝလေးထဲမှာ, အမှတ်တရအလှူ
ခုနှစ်နှစ်တာ ခွဲနေရတဲ့ ကျနော့် အဖေကို ပြန်တွေ့ရတဲ့ အချိန် ကျနော့် အတွက်တော့ မနေ့ တနေ့က အတိုင်းပဲ။ အဖေက သိပ်ပြီး မပြောင်းလဲပါဘူး။ မဲ နေတဲ့ အသားလေး ပိုမဲသွားတာရယ်။ ဗိုက်လေးပိုရွှဲလာတာရယ် ကလွဲပြီး အရင်လို သန်မာတုန်းပါပဲ။ အဖေနဲ့ ကျနော်က အင်္ဂါနဲ့ စနေဆိုတဲ့ အတိုင်းပဲ။ တွေ့ တုန်း ခဏတော့ လုံးထွေး ချစ်ကြပေမယ့် နာရီဝက်မကြာဘူး စကားနိုင်လု ရန်ဖြစ် စိတ်ကောက်ကြတယ်။ ဒါလဲ မပြောင်းလဲ ပါဘူး။ စိတ်ကောက်တယ် ပြောတဲ့နေရာမှာ ကျနော် ကပဲ အရင်ဦးအောင် ကောက်တာပါ။ စကားနိုင်လုရင်လဲ ကျနော်ကပဲ အရင် အော်ဟစ် ဆူပူပြီး ဒေါသထွက်လိုက်တာပဲ။ အဖေကသာ မျက်လုံးလေး ကလယ် ကလယ်နဲ့ အဲ…အဖေလဲ ဘာမှမပြောရသေးဘူး.. ဆိုပြီး မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ကျန်တတ်တာပါ။ အဖေပဲ ဒီလောက်တော့ သားသမီးအပေါ် နားလည်ပေးရမှာပေါ့လို့ ကျနော်က အဖေဘက်ကနေ အမြဲ ဖြည့်တွေးပေးပါတယ်။
တကယ်တမ်းကျ ကျနော် မြန်မာပြန် ပြန်သွားတဲ့ အချိန် အပျော်ဆုံးလူကို မေးပါဆိုရင် ကျနော့် အဖေထိပ်ဆုံးက ပါမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အဖေက အမေထက် ပိုလွမ်းတတ်ပါတယ်။ ကျနော် ဆိုက်ပရပ်စ်မှာ နေတဲ့ အချိန်ကတည်းက အဖေက အမေမသိအောင် ကျနော့်ကို ဖုန်းလှမ်းလှမ်းခိုးဆက်ပါတယ်။ ခိုးဆက်တယ် ဆိုတာက အမေ သိအောင် ဆက်တဲ့ အချိန်အပြင် ကျနော့်ကို ဘီယာဆိုင်ကနေ ခဏခဏဆက်လို့ပါပဲ။ ခုစကာင်္ပူမှာ နေတော့လဲ အဖေကပဲ ဆက်တာပါ။ အမေသိအောင် အမေနဲ့ တူတူ ခေါ်သလို အမေမသိအောင်လဲ ခေါ်ပါတယ်။
ကျနော့်ကိုလာကြိုတဲ့ မနက်ကဆို အဖေမျက်နှာပြုံးပျော်နေတာ တားဆီးလို့ မရပေါ့။ ကျနော် ပြန်သွားတော့ အဖေ့အတွက် အဖေကြိုက်တတ်တဲ့ ခေါင်းလိမ်းဆီ၊ ဆံပင်ပျော့ဆေးနဲ့ အကျီင်္တွေဝယ်သွားပါတယ်။ အိမ်ရောက်ရောက် ချင်း အကျီ င်္တွေကို အဖေ့အတွက် ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဖေလဲ အားရ၀မ်းသာ အကုန်သယ်ပြီး အဖေ့ အခန်းထဲဝင်သွားပါတယ်။ ကျနော်လဲ ခွဲတမ်းတွေ ခွဲပြီးတော့ အပြင်သွားမယ် ဆိုပြီး ရေချိုး ပါတယ်။ စနေ အင်္ဂါ ဇာတ်လမ်းကဒီမှာ စပါတယ်။ ကျနော် ရေချိုးပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ အဖေက ကျနော့် အခန်းထဲမှာ ကျနော့် အကျီ င်္အသစ် ဆိုဒ် အသေးကို မရမက စွတ်ထားတာ ရင်သား ရော ဗိုက်သားပါ အထုတ်လိုက် အထည်လိုက် အစ်ထုတ်ထွက်နေတာ အတိုင်းသား မြင်ရတော့ ကြည့်ရတာ တော်တော် ရုပ်ဆိုးပါတယ်။ ပြီးတော့ အကျီ င်္အသစ်က ကျနော် နောက်ထပ် ၀တ်လို့ မရအောင် လုံးဝ ကျယ်သွားပါပြီး။ ပြီးတော့ ကျနော့် မျက်မှန် ကို ယူတတ်ထားတာ သူ့ မျက်နှာ အကြီးကြီးနဲ့ မဆံ့ ပဲ မျက်မှန်ကိုင်းက ကျယ်ထွက်သွားပါတယ်။ အဖေ့ကတော့ သူ့ကိုယ်သူ ငယ်သွားတယ် ထင်တာပေါ့။ ကျနော့် မျက်စိထဲမှာတော့ ရယ်ချင်စရာ ကောင်းလောက်အောင်ကို ကြည့်ရရုပ်ဆိုးပါတယ်။ ကျနော်ကမြင်တော့ အော်ဟစ် သောင်းကျန်းပြီး အတင်းချွတ်ခိုင်း ရတယ်။ အဲဒီအခါကျတော့ မျက်လုံး လေးကလည်ကလည်နဲ့ အကျီတွေ မျက်မှန်တွေ ပြန်ချွတ်သွားပါတယ်။ ဒါတောင် ကျနော် ပတ်တဲ့ နာရီကို ကျနော် မသိအောင် ယူပြီး တရက် ပတ်လိုက်သေးတယ်။ အဖေ့အတွက် က ၀ယ်ပေးပြီးသား။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်ဘာသုံးသုံး အဖေသဘော ကျတတ်တာ ငယ်ငယ်ကတည်းကပါပဲ။
နောက်နေ့ မနက် အဖေ့ အခန်းထဲ ၀င်တော့ အဖေက ခေါင်းဖြီးပြီး ဆံပင်ထောင်နေတာ တွေ့တော့ ကျနော် သဘောတကျနဲ့ အဖေ့နားသွားပါတယ်။ အဖေ့နားရောက်တော့ စိတ်ထဲက မယုံသကာင်္ ဖြစ်လာတာနဲ့ အဖေ့ခေါင်းကို ယူနမ်းမိပါတယ်။ အဖေ့ခေါင်းမှာ ကျနော်သုံးနေကျ မျက်နှာသစ်ဆေးအနံ့ ရတော့ မယုံသကာင်္ ဖြစ်တာနဲ့ အဖေ့ကို ဘာလိမ်းထားလဲ မေးတော့ အဖေက ပြုံးစိစိနဲ့ သား ခေါင်းလိမ်းဂျယ်လ် တွေ ယူလိမ်းတာပါ ဆိုပြီး သူလိမ်းတဲ့ဗူးကို ပြတာ ကျနော့် မျက်နှာသစ်ဆေးပါ။ ကျနော်လဲ နောက်ထပ်တခါ အော်ဟစ်ပြီး ခေါင်းလျှော်ခိုင်းရပါတယ်။ ပထမနေ့က ကျနော် လိမ်းတဲ့ ဂျယ်လ် ထင်ပြီး ကျနော့် အခန်းထဲဝင် မှားယူသွားတာ။ ကျနော်အော်တော့လဲ အဖေက မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ သူမဟုတ်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ အဖေက အသစ်အဆန်းမြင်တိုင်း ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ် စမ်းသပ်သုံးချင်တဲ့ အကျင့်ရှိပါတယ်။
အမေကိုပြောတော့ အမေကလဲ ကျနော် ကိုပြန်တိုင်တယ်။ အမေရန်ကုန်သွားတုန်းက အသားရည် မခြောက်သွေ့တဲ့ ခရမ်ခ်တွေကို ဈေးကြီးပေးဝယ်လာပါတယ်။ ဈေးကြီးတော့ အမေ့ ခမျာ ချွေတာပြီး နည်းနည်း ဆီလိမ်းပါတယ်တဲ့။ တနေ့ အဖေကတွေ့တော့ အမေ့ကို အဲဒါဘာကြီးလဲ။ ဘယ်လောက်လဲ မေးပါတယ်တဲ့။ အမေကလဲ အသားရည် လှတဲ့ဆီပါ။ တဗူးမှတစ်ထောင်ပါလို့ လွယ်လွယ်ပဲ ပြောလိုက်ပါတယ်။ နောက်တနေ့ အမေပြန်လာတော့ အဖေက အခန်းထဲမှာ အမေ့ရဲ့ အသားရည်လှတဲ့ ခရမ်ခ်တွေကို သူ့ ခြေသလုံးမွှေးထူထူနဲ့ ခြေသလုံးကို တဗူးလုံးကုန်အောင် လိမ်းထားတော့ အမေ့မှာ ငါးမိနစ်လောက် အသက်ရှူ ရပ်သွားတယ် ဆိုပါတယ်။ အမေတားတဲ့အချိန်မှာ ဗူးမှာ ဘာမှ မကျန်တော့ပါဘူး။ အဖေက အမွှေးထူထူ ခြေသလုံး နှစ်ဖက်လုံးကို ပယ်ပယ် နယ်နယ် လိမ်းထားပြီးပါပြီး။ အမေအော်တော့မှ ပြုံးစိစိနဲ့ အဖေက ခြေသလုံးတွေ မဲနေလို့ လိမ်းတာပါတဲ့။ အမေ့ခမျာ ဈေးကြီးပေး ၀ယ်ထားရတဲ့ ခရင်မ် တွေ ကုန်သွားလို့ ထမင်းနှစ်ပတ်လောက် မစားနိုင် ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ ကျနော့် မျက်နှာသစ်ဆေး လိမ်းတာလောက် မဆိုးသေးဘူးလို့ပဲ တွက်လိုက်ပါတယ်။
ညရောက်တော့လဲ ကျနော့် အိပ်တဲ့ နေရာနားမှာ ခေါင်းအုံးလေးပိုက်ပြီး တ၀ဲလည်လည်ပါ။ အဖေက ကျနော်နဲ့ အိပ်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က အဖေဟောက်တာ မခံနိုင်တာရယ်၊ အဖေက ညအိပ်ရင် အသက်ရှူ မ၀အောင် ဖက်အိပ်တတ်တော့ ကျနော်က အဖေလာအိပ်ချင်တာကို မသိချင်ယောင် ဆောင်ပြီး နေပါတယ်။ ကျနော် အိပ်ပျော်မှ ယောင်လည်လည်နဲ့ အဖေ လာအိပ်ပါတယ်။ အဖေ့ဟောက်သံကြောင့် ကျနော်လန့်နိုးတော့ အဖေ့ကို နှိုးပြီး မောင်းထုတ်ပါတယ်။ အဖေ့မှာ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ ခေါင်းအုံးပိုက်ပြီး အမေ့အခန်းထဲပြန်သွားပါတယ်။ မနက်ကျရင် အဖေ့အကြောင်းပြချက်က မင်းအမေ အီးဗုံးကို မခံနိုင်လို့တဲ့။ ကျနော်မလာခင်ကတော့ အမေ့အီးဗုံးကြားမှာ ပျော်မွေ့နေပြီး ကျနော်ခဏပြန်လာမှ အမေ့ အီးဗုံးကို မခံနိုင်ဘူး ပြောတဲ့ အဖေ့ကို အမေကလဲ တော်တော် ပေါက်ကွဲပြီး မကျေနပ်ချက်နဲ့ ညညတိုင်း ဗုံးထုတော့တာပါပဲ။
ကျနော်ပြန်တဲ့ ညတွေတိုင်း အဖေနဲ့ ဘီယာသောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဖေက ကျနော်နဲ့ ဘီယာသောက်ရတဲ့ အချိန်ကို ပျော်ပါတယ်။ အရင်ကဆို သားအဖနှစ်ယောက် တူတူသောက်ပြီး စကားနိုင်လု ပြီး စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်ကြပါတယ်။ ကျနော် မနိုင်တဲ့ အခါကျရင် အဖေ့ကို ကျနော်စကားမပြောတော့ပါဘူး။ အဲဒီအခါကျ အဖေက မနေနိုင်ပဲ အရှူံးပေးပါတယ်။ အခုတခေါက်သောက် ဖြစ်တော့လဲ အဖေက အရင်က စကားများ စိတ်ကောက်တာကို အမှတ်တရပြောပါတယ်။ အများဆုံး ပြောဖြစ်တာက ကျနော့်ကို မိန်းမယူခိုင်းတာပဲ။ ညတိုင်းလိုလို မိန်းမယူဖို့ နဲ့ မြေးချီချင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ အရင်ထားခဲ့တဲ့ ရည်းစားဆီတွေလဲ အဖေကိုယ်တိုင် ဖုန်းခေါ်ပေးပါတယ်။ အဖေက ကျနော့်ကို ကျနော့်ရဲ့ အရင်ရည်းစားတွေရဲ့  အင်ဖော်မေးရှင်းတွေကို ပေးပါတယ်။ ဘယ်သူက ဘယ်ရောက်နေလဲ။ ဘယ်သူဖုန်းနံပတ်က ဘာပေါ့။ အမေ့ကို ပြန်တိုင်တော့ အမေက အဖေ့ကို ဒဏ်ပေးတဲ့ အနေနဲ့ အခန်းပြင်ထုတ်ပါတယ်။
ကျနော်အိမ်ပြန်တဲ့ အချိန်မှာ ကျနော့်အိမ်မှာ Prison Break စာတန်းထိုးခွေက နာမည်ကြီးနေပါတယ်။ အဲဒီထဲက စကိုးလ်ဖီးကို အဖေကကြိုက်တော့ ညီမလေးက အဖေ့ကို စကိုးလ်ဖီးကေနဲ့ တူအောင် ညှပ်ပေးမယ် ပြောလို့ ကျနော်တို့ အဖေကို မြှောက်ပေးပြီး ညီမလေးကို ညှပ်ခိုင်းလိုက်တာ စကိုးလ်ဖီးကေ မဖြစ်ပဲ ကတုံးဆံပင်ပေါက်ကေ ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဖေက အိမ်မှာ လူကောင်ကြီးပေမယ့် မိန်းမနဲ့ သားသမီးတွေ ပြုသမျှ နုရတဲ့သူဖြစ်နေပါတယ်။ ကျနော်ပြန်ရောက်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်နဲ့ အဖေ့ကို မိန်းမလို ဆင်၊ အမေ့ကို ရဲပေးလုပ်ပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်တမ်း ကစားခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်ပြန်တွေးတွေး သဘောကျ ပြုံးလို့ မဆုံး ဖြစ်မိပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခဏတာ ပြန်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်မှာ အဖေနဲ့ ဘီယာတူတူ သောက်ခဲ့ရတာ၊ အဖေ ပြောတဲ့ ဘ၀အကြောင်းတွေကို နားထောင်ခဲ့ရတာ၊ အဖေ့ကို အော်ဟစ် ရန်ဖြစ်ခွင့် ရခဲ့တာတွေအတွက် ပြန်ခဲ့ရတဲ့ ခရီးကို ပျော်ရွင်မိပါတယ်။ အဖေ့ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ဒီအသက်အရွယ်ထိ ကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့ သားသမီးနဲ့ မိန်းမကို မငြီးမငြူ အခုထိ လုပ်ကျွေးနေတဲ့ အဖေ့ကို လေးစား ဦးညွတ်ရင်း….
Writer Sein Lyan Time 7:22 pm7comments: Links to this post
အလုပ်+ အလုပ် = နားချိန်
အခုရက်ပိုင်း စိတ်ရော လူရော မနားရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ သင်တန်းက တဖက်၊ ကျောင်းက တဖက်နဲ့ အလုပ်က တဖက်နဲ့ ကလေးက လှည့်ထိန်းလိုက်သေးတယ်။ ဒီကြားထဲ ပတ်တို...